Nei pasina madhimoni pane echitatu-bato kiyi yeiyo iOS? | IPhone nhau
La kuita basa Mune shanduro dzichangoburwa dzeIOS inonyanya kubatsira kune mamwe mamiriro ezvinhu, zvisinei, zvirokwazvo waona kuti kana tikasarudza chechitatu-bato kiibhodhi muIOS 8, tinofanirwa kuzvisiya.
Nei zvakadaro hatigone kushandisa typing yezwi pane yechitatu-bato kiyi? Chikonzero chikuru ndechekuti Apple haibvumidze kuwana iyo API iyo inobvumidza kushandisa chinhu ichi, nekudaro, vagadziri havakwanise kuita madhimoni pane avo vekiribhodi.
Wakatarisana nemamiriro ezvinhu aya, mhinduro chete inogoneka ndeyekuti mugadziri wega wega apinze yako yekuraira system nezwi mukushandisa kwavo, chimwe chinhu chisingakwanisike kune vazhinji vavo nekuda kwekushaikwa kwezviwanikwa. Chimwe chipingamupinyi chikuru ndechekuti chechitatu-bato kiyibodi havana mukana wekutora maikorofoni yeiyo iPhone saka kana paine imwe nzira yekucherechedza izwi kune iyo Apple inopa, haigone kushandiswa nematurusi ayo Apple parizvino anopa.
Kunyangwe chikonzero nei Apple isingabvumidze kupinda kune yayo izwi kududzira system isinganyatso kuzivikanwa, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti imhaka yechibvumirano chekupa marezenisi pakati peApple neNuance. Rangarira izvo Nuance iri kuseri kwetekinoroji inova nebasa rekuziva izvo zvatinotaura kune iyo iOS 8 keyboard uye kuna Siri.
Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, tinogona chete mirira Apple kuburitsa API mushanduro dzeramangwana dzeIOS 8 SDK kana pamwe yatove yeIOS 9. Kubata ID kwakatangawo kushandiswa neApple uye nhasi vanogadzira vanogona kushandisa mashandisiro avo mukati memashandisirwo avo, saka, zvimwe zvakafanana zvichaitika nehurongwa hwekutaurira mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Nei pasina madhimoni pane echitatu-bato kiyibhodhi yeIOS?
gara uchindibvunza izvozvo
Zvakareruka, nekuti Apple haina hanya, ivo vachange vachigadzira yavo.
MutengoRadar, chirongwa chekukubatsira iwe kuchengetedza kana uchitenga paAmazon (emahara macode)